မျောက်လွှဲကျော် လက်ဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Lar Gibbon or White-handed Gibbon)
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တစ်ခု၌ တွေ့ရသော မျောက်တစ်ကောင်
CITES နောက်ဆက်တွဲ - ၁ (CITES)
မျောက်လွှဲကျော်လက်ဖြူ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ‘ဟိုက်လိုဘိတ် လာ’ ဖြစ်သည်။ မျောက်လွှဲကျော်လက်ဖြူသည် မျောက်လွှဲကျော်မျိုး မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး မျိုးပြုန်းတီးမှုအန္တရာယ်ကျရောက်နေသော မျိုးစိတ်လည်းဖြစ်သည်။ မျောက်လွှဲကျော်များအနက် လူသိအများဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် တွေ့နေကျ မျိုးစိတ်လည်းဖြစ်သည်။
မျောက်လွှဲကျော်လက်ဖြူ၏ ကိုယ်အရောင်အဆင်းမှာ အနက်ရောင်၊ အညိုရင့်ရောင်မှသည် အညိုနုရောင်၊ သဲရောင် စသဖြင့် ရှိလေသည်။ လက်နှင့်ခြေချောင်းတို့တွင်မူ အဖြူရောင် ဖြစ်သည်။ နက်မှောင်သည့် မျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက်တွင်မူ အဖြူရောင်အမွေးများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အရောင်အဆင်းဖွဲ့စည်းမှုများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး မျောက်လွှဲကျော်အထီးနှင့် အမတို့မှာ မတူညီကြပေ။ မျောက်လွှဲကျော်လက်ဖြူများသည် ၎င်းတို့၏ လက်မောင်းများကို အသုံးပြုကာ သစ်ကိုင်းများကို လွှဲခိုလျက် သွားလာတတ်ကြသည်။
မျောက်လွှဲကျော်လက်ဖြူတို့၏ နေ့စဉ်စားသောအစားအစာ၏ ၂၅% မှာ သစ်သီးသစ်ဥများ ဖြစ်သော်လည်း သစ်ရွက်နုများက ၂၉%၊ အင်းဆက်ပိုးမွှား ၁၃%၊ ပန်းများက ၈% ပါဝင်လေသည်။
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 179–180။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Brockelman, W. (2020). "Hylobates lar". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T10548A17967253.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျောက်လွှဲကျော်_လက်ဖြူ&oldid=743087" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။